Kufunyenwe ilogo entsha "engenasiphelo" ngaphakathi kuhlobo lwewebhu lweApple Music | Ndisuka mac
Kufunyenwe ilogo entsha ethi "Ilahlekile" ngaphakathi kuhlobo lwewebhu lweApple Music
Ngamahemuhemu okufumana malunga nokuqhubela phambili kwi-Apple Music, ngoku kufuneka sazi yonke into ephumayo. Kwaye kuye kwafunyanwa nje I-logo entsha ngaphakathi kwewebhu yeApple Music ebizwa ngokuba yi «Lossless». Oku kuthetha ukuba into ebesithetha ngayo ngale ntsasa inazo zonke iinyani. Sinomculo omtsha we-Apple ngaphambili.
Amarhe abonisa oko Apple Music entsha iyeza. Ubuncinci ngokomgangatho womculo wayo. Kuya kufuneka sikhumbule ukuba amarhe abonisa ukuba ngomso umhla we-18 uza kukhutshwa kungekuphela nje ii-AirPods ezintsha kodwa kunye nomgangatho kwi-Apple Music engazange ibonwe ngaphambili. Singayithelekisa neTidal kwaye iya kwenza abasebenzisi abaninzi bajoyina le nkonzo ngokukhawuleza. Umgangatho we-Hi-Fi ongenasiphelo kunye neDolby Atmos. Le logo entsha iqinisekisa ukuba kuya kuba njalo.
Ifunyenwe ngumyili UStijn de Vries, a I-logo entsha engenaLoss ngaphakathi kweApple Music kwiwebhu. Kukho ilogo yesibini ethi "Hi-Res Lossless". Lo mzobo kunokwenzeka ukuba ube yinto yebheji eboniswe ecaleni kweengoma ezixhasa ukusasazwa kwesandi esilahlekileyo. Iireferensi ezininzi zokulahlekelwa ngaphandle kokulahleka kunye neDolby Atmos sele ifunyenwe ngaphakathi kweApple Music kwiwebhu.
Hmm jonga into endiyifumene kwiwebhusayithi yoMculo we-Apple…. Nantsi le nto
-UStijn de Vries (@StijnDV) Ngamana 17, 2021
Nangona kunjalo U-Apple ukhuphe isibhengezo esikhulu esiza kuthi "sitshintshe umculo unaphakade" ngempelaveki, asikaqinisekisi okanye sazisile ukuba eso sibhengezo siza kuphila nini. Kodwa into esiyicaceleyo kukuba kuncinci okuseleyo ukubona utshintsho kwisicwangciso kwiApple Music. Abaxhamli abakhulu baya kuba ngabasebenzisi Ngubani oya kuyivuyela le nto intsha kwaye ethathela ingqalelo ukuba inkampani ayizukuyenza inkonzo yobhaliso ibize kakhulu kwaye iya kugcina i-9.99 euro ngenyanga kubhaliso lomntu ngamnye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Amahemuhemu » Kufunyenwe ilogo entsha ethi "Ilahlekile" ngaphakathi kuhlobo lwewebhu lweApple Music
24-intshi iMac iveki